DADKIII GEEDKA CAABUDI JIRAY
Beri baa nin wuxuu soo maray dad geed caabudaya, arrintaana aad buu uga carooday, wuxuuna go'aan ku gaaray inuu geedka jaro, wuxuu iska aaday gurigiisii habeenkii oo dhanna wuxuu ku soo jeeday inuu Ilaahey caabudo si go'aankaas ilaahey ugu hirgeliyo, subixii aroortii markay aheyd ayuu gurigiisii faas ka soo qaatay wuxuuna soo aaday geedkii, wuxuuna naftiisii ku yiri; "Ilaahey sokadiisa ayey dadkani geed cabudayaan, ballan waxaan ku qaaday inaan geedkaan xididada u siibo" isagoo wadadii ku sii socda ayaa waxaa ka hor yimid shaydaan nin, wuxuuna ku yiri "Xageed u socotaa?" wuxuu ku yiri waxaan u socdaa geedkaas" "Maxaad ka doonaysaa ayuu hadana weydiiyey"? "Waxaan doonayaa inaan gooyo ayuu ugu jaawabay" misana wuxuu weydiiyey "oo maxaad u goynaysaa sabab?" wuxuu yiri "dadkii baa Ilaah ka dhigtay sidaas baan u goynayaa" shaydaankii ninka ahaa ayaa ku yiri hadana "ma awoodid inaad goyside iskanoqo naftaada khatar ha gelinine" Caabidkii baa wuxuu yiri "ma noqonayo ilaa aan gooyo" shaydaankii ayaa hadana ku handaday caabidkii waan ku dilayaa haddaadan ka noqon go'aankaaga, hase yeeshee ninkii caabidka ahaa wuu diiday, dagaal xun ayaana dhex maray labadoodii, laakiin wuxuu ninkii caabidka ahaa dhowr goor legday oo ka adkaaday shaydaankii, intaa kadib shaydaankii wuxuu go'aan ku gaaray inuu ninka xoog ku kari waaye xeeladeeyo, wuxuuna ku yiri; "isiidaa aniga iyo adigu aan wada hadalno oo aan hishiinee, nin yahow sidaad ogtahay waxaad tahay nin maskiin ah sidaa darteed maalin kasta barkintaada hoosteeda shilin ka qaado, oo geedkaa iska dhaaf oo hagoynin, maslaxadaadana fiirso". Ninkii cabidka ahaa sidii buu ka ogolaaday shaydaankii gurigiisiina isaga noqday, waxaa uuna maalin kasta shilinkii ka qaadanayey barkinta hoosteeda muddo 3 beri ah, maalintii afraad ayuu shilinkii meeshii ka waayey, wuxuuna markiiba dafay faaskiisii, wuxuuna aaday geedkii, sidii oo kale meel geedka sokadiisa ah ayaa waxaa kaga hor yimid shaydaankii ninka iska soo dhigi jiray, wuxuuna ku yiri "xageed u socotaa"? wuxuu ugu jawaabay caabidkii Geedkii ayaan soo jarayaa", wuxuu ku yiri shaydaankii oo dhoolo caddaynaya "doqon yahaw ujeedadaadu taa ma aha ee waxaad raadinaysaa shilinkii aad weyday, ka noqo geedka haddii kale waan ku garaacayaa" hase yeeshee caabidkii wuu diiday hadalkaa foodda ayeyna is dareen. Ninkii caabidka ahaa circa inta loo qaaday oo dhulka lagu dhuftay si xunna loo garaacay, markaasuu weliba ku yiri: "maalintii hore jiniga iyo insiguba kuma ayan kari laheyn oo waxaad ku socotay Alle dartii iyo niyad bir ah, laakiin maanta waxaad ku socotaa weyntadii shilinka, mana guulaysanaysid, sidaa darteed ayuu caabidkii isagoo niyad jabsan oo khasaaray iska soo noqday".
Beri baa nin naag hore qabay wuxuu guursaday naag labaad, waxaa masayrtay markaa naagtiisii hore, naagtii dambe ayuuna xageedii u batay, si walba hadday yeeshay naagtii hore ninkii sidii sii hore way ku soo celin waysay.
Intaa kadib ayey waxay naagtii hore u tagtay nin oday ah oo faalalow ah, waxayna uga sheekaysay mashaakilka haysta, waxayna ka codsatay inuu sicir iyo farsamo kaleba u adeejiyo si ay ninkeedii sidii hore ugu soo celiyo, odaygii wuu ka oggolaaday naagtii codsigeeda wuxuuse weydiistay inay u keento xoogaa dhogor waraabe, taasoo uu ugu akhrin doono wax ninkeedu ugu soo noqonayo.
Naagtii arintaa intay la adkatay arrintii ayey waxay ku tiri odaygii: "sheekhow taa amaanay suurtoobaynin". Odaygii oo dhoolo caddaynaya ayaa ku yiri "haddii aad doonaysid ninkaagu inuu sidiisii hore kuugu soo noqdo ii keen dhogorta waraabaha, dhogor la'aana waxba ma samayn karo".
Naagtii waxay ku noqotay gurigeedii iyadoo niyad jabsan oo aad u murugaysan, waxayna arrintaa ka fekertay waqti badan sidii ay ku heli laheyd dhogor waraabe, waqti fog kadibna waxay heshay fikrad ay ku heli karto dhogor waraabe, waqti yar kadibna waxay ku noqotay odaygii iyadoo xoogaa dhogor ah wadda. Odaygii wuxuu weydiyey sida ay ku soo heshay dhogorta waraabaha?. Waxay ugu jawaabtay, "waxaan qalay wan buuran, waxaana galab walba u tuuri jiray cad hilib ah warabe ku noolaa keyn agtayda ah", maalinba meesha aan ugu tuuro meel ka sokaysa ayaan u dhigayey ilaa waraabihii gurigayga uu ka so galay, markaasaan waxaan ka goostay dhogor", odaygii intuu qoslay ayuu naagtii ku yiri haddii aad awooday inaad waraabe duur joog ah gurigaaga soo gelisid sidaad baad u awoodi wayday ninkaagii ugu soo ceshato xeelad ama mi kale"?
Naagtii way noqotay waxayna goosatay in ay ninkeeda soo ceshato wayna ku guulaysatay, waxaana sheekada ka muuqata wax ka xoog badan ma jirto doonista qofka, waxayna ka awood badisaa mashaakilka qofka oo dhan, waxayna xaqijisaa doonistiisa.
Qeytbtii 16-aad halkaan ka Aqriso